Kaominina Ivato: marobe ny fotodrafitrasa hatsangan’ny filoha Rajoelina - ewa.mg
Kaominina Ivato: marobe ny fotodrafitrasa hatsangan’ny filoha Rajoelina
News - Kaominina Ivato: marobe ny fotodrafitrasa hatsangan’ny filoha Rajoelina
Nanatitra mivantana ilay kamiao
vaovao eny amin’ny kaominina Ivato nny filoham-pirenena Rajoelina
Andry, omaly. Tamin’izany ny namalian’ny fangatahan’ny ben’ny
Tanàna, Randrianarisoa Penjy, mikasika ireo fotodrafitrasa maro
Anisan’izany ny kianja
manara-penintra sy ny “gymnase couvert” ho an’ny tanora. Eo koa ny
hanavaozana tanteraka ny tranon’ny kaominina ho tena taratry ny
fandrosoana. Ankoatra izany ny fananganana ny sekoly manara-penitra
sy ny fampitomboana ireo sekoly. Eo koa ny fanavaozana tsy maintsy
hatao amin’ireo efitranon-tsekoly efa tena simba.
Nanome baiko avy hatrany ny
governoran’Analamanga ny filoham-pirenena hanamboatra ny lalana
rehetra. Toraka izany ny baiko nidina amin’ny Jirama amin’ny
hanazavana ny tanàna. Ivato mamirapiratra no tarigetran’ny ben’ny
Tanàna ka ho tonga amin’izany ny kaominina miaraka amin’ny
Tsy niandry ela, nidina avy hatrany
nijery ny asa tokony hatao anatin’ny fotoana haingana ny
governoran’Analamanga, Rasoamaromaka Hery. Niaraka amin’ireo
teknisianina efa matihanina izy tamin’izany hanafainganana ny asa
Nankasitraka ny filoham-pirenena ny
ben’ny Tanàna, Randrianarisoa Penjy, amin’ireo fotodrafitrasa ho
L’article Kaominina Ivato: marobe ny fotodrafitrasa hatsangan’ny filoha Rajoelina a été récupéré chez Newsmada.
Herisetra sy fampijaliana ny zanany: nitolo-batana teny amin’ny polisy ilay raim-pianakaviana
Rehefa niafina hatramin’ny alatsinainy teo, tonga nitolo-batana teny amin’ny Sampandraharahan’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona, etsy Tsaralalàna, omaly, ilay raim-pianakaviana nanao herisetra amin’ny zanany.Niteraka resabe sy fanehoan-kevitra teny anivon’ny tambajotran-tserasera ”facebook” ary teny anivon’ny fiarahamonina ity herisetra nataon’ny raim-pianakaviana iray tamin-janany teny Amboditanimena – Soavimasoandro ity. Tao ireo nanome tsiny be fahatany ilay raim-pianakaviana tamin’ny herisetra nataony, tao kosa anefa ireo nanome rariny satria tena efa tafahoatra ny ditran-janany. Raha ny fantatra, somary madiditra ity boaikely zanany ity ary efa indimy niova sekoly ary matetika voaantso any am-pianarana ny rainy noho ny ditrany. Manoloana izany, tsy nahatsindry fo ny rainy ka izao niafara tamin’ny daroka sy vono izao. Nefa koa matoa maditra ny ankizy, misy fitaizana tsy mandeha araka ny tokony ho izy ao an-tokantrano, mety hoe voadaroka matetika foana izy, hany ka lasa sarotra tenenina. Raha ny zava-nisy, nitolo-batana teny anivon’ny Polisy misahana ny zaza tsy ampy taona, omaly, ilay raim-pianakaviana nikapoka ny zanany. Hitohy, araka izany, ny fanadihadiana ny raharaha ary hatolotra ny fitsarana tsy ho ela izany.Niaiky ny hadisoany ilay raim-pianakaviana…Nanao fifonana ampahibemaso ihany koa ilay lehilahy ary niaiky ny hadisoany. « Maneho fifonana amin’ny rehetra, ny vady aman-janako sy ireo olona voatohina amin’ny sary niparitaka tamin’ny haino aman-jery sy ny “facebook” aho eto. Tsy hamerina intsony izany aho ary ifonako tanteraka izany fahadisoako izany… Tiako ny vady aman-janako », hoy ilay raim-pianakaviana, tao anaty horonantsary iray hafa. Tsiahivina fa niparitaka tao anaty tambajotran-tserasera, ny alatsinainy teo, ny horonantsary naneho fampijaliana nataon’ity raim-pianakaviana ity tamin’ny zanany lahy vao 11 taona. Nisy ireo herisetra sy ny vely kifafa nataony ilay ankizilahy. Tao ireo nilaza fa nandrahona ireo manodidina ilay lehilahy raha vao mba miteny azy ireo mpiray vodirindrina aminy. Nidina teny an-toerana ny polisy nisambotra azy, saingy tsy nahatratra intsony ilay lehilahy ary izao niafara tamin’izy nitolo-batana izao. Ireny ny zava-nisy sy ny resaky ny olona fa anjaran’ny fitsarana no manome sazy mifandraika amin’izany raha voaporofo fa tena meloka izy.Henintsoa Hani sy J.CL’article Herisetra sy fampijaliana ny zanany: nitolo-batana teny amin’ny polisy ilay raim-pianakaviana a été récupéré chez Newsmada.
Mahabo Morondava : tratra ny voamboana miisa 15 sy hazoala 12
Mampihatra ara-bakiteny ny “tsy fandeferana mihitsy” (tolerance zero) amin’ny fikapana tsy ara-dalàna hazo ny minisiteran’ny Tontolo iainana. Andrasana ny fanatanterahana izany amin’ny sehatra hafa, toy ny “trafika sokatra”.Tsy mikely soroka tokoa ny fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy ny harena lovain-jafy (Dredd) any Menabe, miady amin’ireo mpandripaka harena voajanahary, toy ny ala. Taorian’ny fanomezam-baovao avy any amin’ny olona tsara sitrapo, nidina ifotony tany Aseseha, fokontany Manamby, distrika Mahabo, faritra Menabe, izy ireo, ny alahady 20 desambra teo tamin’ny 10 ora sy sasany alina. Miisa 15 ny hazo manary na voamboana tratra, miampy hazoala handy miisa 12. Tafatsoaka ny tompon’ireo hazo ireo. Fantatra fa saika hoentina any Antsirabe, faritra Vakinankaratra, ireo hazo ireo ka nogiazana avy hatrany.Ankoatra izany, nahatratra olona telo ny Dredd Menabe, ny ONG Fanamby ary ny miramila 3/RM Morondava, nandritra ny fisafoana ny 5 hatramin’ny 13 desambra teo tany anaty Faritra arovana Menabe Antimena. Tratra teo am-pambolena katsaka tanaty ala vao avy nodorany izy ireo.Etsy ankilany, tsikaritry ny firahamonim-pirenena Alliance voahary gasy fa maivana ny sazy omena ireo mpanao trafika sokatra. Amin’izy ireo, tsy tokony hanavahana na iza na iza ny fampiharana ny sazy ambony indrindra mba ho anatra ho an’ny hafa, toy izao atao amin’ny mpanimba ala izao.Njaka A.L’article Mahabo Morondava : tratra ny voamboana miisa 15 sy hazoala 12 a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana loholona: tsy voahaja ny lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra
Mbola manohy ny fomba ratsy nataon’ny teo aloha? Tsy nanaja fitsipika sy lalàna ireo mpitantana eo anivon’ny faritra Alaotra Mangoro sy Analanjirofo, raha ny fanadihadiana natao sy ny angom-baovao natrehina tetsy sy teroa. Samy tonga nanatrika ny fanokafana ny fampielezan-kevitra tetsy amin’ny trano fandraisam-bahiny Splandide ireo governoran’ny faritra roa tonta Alaotra Mangoro sy Analanjirofo ary samy niaraka amin’ny mpikamban’ny kabinetrany avy ny alakamisy 19 novambra teo. Tahaka izany koa ny 21 novambra tao Vavatenina. Nampiarahina amin’ny lanonana ofisialy fametrahana vato fototra fanaovan-dalana notarihin’ny governoram-paritra Analanjirofo ny fihaonana tamin’ireo mpifidy vaventy eo anivon’ity disitrika ity. Mbola nitarika izany ny governoram-paritra Analanjirofo sy ny tale kabinetrany.Fihoaram-pefin’ireo manampahefana Araka izany, hita ho miezaka mafy ny lisitra avy amin’ny antokon’ny fitondrana, Irmar. Miasa mangina tsy re tsaika kosa ny avy amin’ny antoko Malagasy miara-miainga ary tsy tazana firy ny tsy miankina “Iray ihany isika rehetra“, ivondronan’ ireo mpampiantra mpikaroka eo anivon’ny oniversiten’i Barikadimy.Midika ireo rehetra ireo fa isehoan’ny fihoaram-pefy ity fifidianana loholona ity amin’izao fampielezan-kevitra izao. Mazava ny voalazan’ny lalàna ny amin’ny tsy tokony hanaovan’ireo olom-boatendry eo amin’ny fitantanana ny faritra sy ny disitrika ny fiandaniana amin’ny fampielezan-kevitra ka hampifidy izatsy na izaroa.Sajo sy Synèse R.L’article Fifidianana loholona: tsy voahaja ny lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra a été récupéré chez Newsmada.
Fantatra fa karohin’ny polisy ny olona iray tompon’andrai­kitra ao amin’ilay orinasa mpikirakira jirofo voaroba tany Toamasina, tamin’ny herinandro lasa teo. Ny famotorana ny mpamilin’ ny kamiao nitondrana ny jirofo halatra milanja valo taonina no nahafantarana an’io tompon’andraikitra io. L’article Halatra jirofo est apparu en premier sur AoRaha.